Vagari veMasvingo Voratidzira Nyaya yeKubiwa kweVana
Mumwe mukadzi wemumasvingo akatozopotera kumapurisa mushure mekunge atemwa temwa nematombo nevagari vemunzvimbo iyi, avo vaimupomera mhosva yekuurayisa mwana wake kuitira kuti awane hupfumi.
Mazana nemazana evagari vekuMasvingo vapinda mumigwagwa nhasi vachishoropodza mapurisa avo vanoti haasi kuita basa rawo nemazvo. Vagari vemuMucheke vanoti vanoda kuti mapurisa aferefete kutsakatika kwakaita vana vatatu mumusha uwu mukati memwedzi miviri.
Veruzhinji vanoti izvi zvinofanirwa kuva zvakaitwa nevanhu vanoshandisa mishonga nokuti kusvika pari zvino vana ava havasati vaonekwa.
Asi mapurisa anoti hapana humbowo hunoratidza zvakaitika kuvana ava, sezvo pasina ari kuziva pane mitumbi yavo. Veruzhinji vanoti kune vanhu vanoita zvemishonga vanouraya vana vadiki kuitira kuti vapfume.
Vagari ava vafora kubva pa Yeukai business centre ndokunanga kuma Majange business centre. Kufora uku kwaitwa kwakachengetedzwa nemapurisa.
Mutauriri wevagari aVa, Va Nicholas Mabhiza, vanoti panofanirwa kuva nemitemo inoomesera vanhu vanobatwa nemhosva dzekuponda vana vadiki. Vamabhiza vati kuratidzira kwavaita kwanga kwakanangana nekuyeuchidza mapurisa nehurumende kutsakatika kuri kuita vana ava hurumende pasina zvairi kuita.
Vatiwo pachava nekuratidzira kwakasimba kana hurumende nemapurisa vakasagadzirisa dambudziko iri.
Tichiri panyaya iyi, nyanzvi munyaya dzechivanhu dzinoti munyika mune vanhu vakawanda vanofunga kuti vanogona kupfuma nekushandisa mishonga. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zvinhu zvakaipa nekuti zvinotora hupenyu hwemumwe munhu.
Professor Gordon Chavhunduka ndivo mutungamiri we Zimbabwe National Traditional Healers association, Zinatha.